Gbasara Anyị - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Zhejiang Shineway Industry Limited. hiwere na 2000. Thelọ ọrụ ahụ dị ugbu a na Longwan Binhai Park (nke dị nso n'ọdụ ụgbọ elu), nke nwere aha ọma nke "China Valve City", yana ngụkọta nke square mita 15,000. Anyị ụlọ ọrụ nwere atọ onwe ụlọ mmepụta ihe na: bọl factory, foundry, bọl valvụ factory. Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ na-ere ọkụ ọkụ na-ere ọkụ oge niile, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ valvụ, na ụlọ nyocha dị iche iche. Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na ụkpụrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, onye ahịa nke mbụ". Elu àgwà, ala price, zuru okè mgbe-sales ọrụ.
Zhejiang Shineway Industry Limited bụ ọkachamara n'ichepụta enterprise tụnyere mgbatị, mmepụta, ahịa na ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ nnukwu ngwaahịa na ngwaahịa ruru eru. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ mpaghara, ihe nkedo, bọọlụ bọọlụ na ihe ndị ọzọ.
Akara nke okirikiri sitere na 1 1/2 inch na 36 sentimita asatọ. Ihe ndi ozo bu: F304, F304L, F316, F316L, A105, LF2, F6A, 410, 4130, 4140, F51, wdg.
Nkedo ngwaahịa adopts ntekwasa ájá technology, mgbatị anya bụ ezigbo, na ọ dịghị mkpa na-egbu maramara mgbe akpụ, na pụrụ ozugbo esichara ma gbakọta. Nkedo ngwaahịa na-agụnye valves, anwụrụ oyiyi akwa, valvụ ngwa, wdg, na nwekwara ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ.
N'ihi na bọl valvụ ngwaahịa, anyị na-eji anyị onwe anyị oge ọgbụgba na anyị nwere ngalaba, nke nwere ike nditịm ịchịkwa àgwà na nnyefe ụbọchị nke ngwaahịa, na price bụ asọmpi. Ball valvụ ngwaahịa na-ese n'elu mmiri bọl valves, ofu bọl valves, igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, carbon nchara bọl valvụ, flanged bọl valves, threaded bọl valves, API6D bọl valves, wdg.
Ngwaahịa a na-ere nke ọma na ahịa ụlọ na nke mba ọzọ, ma na-ebupụ ya na Russia, India, Poland, Italy, Hong Kong, Macao na Taiwan na mba ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ, ma nwee mmeri na otuto sitere na ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ.
Companylọ ọrụ a ga-eweta ngwaahịa dị elu, ọrụ dị larịị, ma jiri nlezianya wee wuo akara "SHINEWAY". Anyị ji obi anyị na-anabata ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ ịkpọ anyị.